UMnyango ugxeke isenzo sikanesi wodumo lwe-video osebenzela ePinetown | News24
UMnyango ugxeke isenzo sikanesi wodumo lwe-video osebenzela ePinetown
Johannebsurg - UMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ukugxekile ukuziphatha komhlengikazi obonakala kwi-video ehlukumeza iziguli.
Le video yalo nesi isabalale ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuvela ukuthi lesi siguli kasisekho emhlabeni.
Kule video, lo nesi waseSt Mary's Hospital ePinetwon uzwakala ekhuluma sakuhlambalaza nalesi siguli esitshela ukuthi asihlale ngezinqa esibuza nokuthi sizimisele ngokugqoka amanabukeni kuze kube yinini.
"Hlala ngezinqa wena, ha ha ha, musa ukuganga wena," kuzwakala lo nesi esho kule video ebhekise kulesi sihuli.
OLUNYE UDABA:BUKA: Unesi 'ehlukumeza' isiguli esibhedlela esisePinetown
Esitatimendeni, uMnyango uthe i-video itshengisa unesi ekhuluma nnesiguli "ngendlela engatshengisi ukuzwelana naso". Lo nesi uphinde abonakale eshintsha isiguli inabukeni ngaphandle kokuvala ikhethini.
"Ukuziphatha okunje akuhambisani nemigomo yeBatho Pele nokuziphatha kwabezempilo."
UMnyango uyasiphenya lesi sigameko kanti uthi uzothatha izinyathelo.
Le video ithathwe ngesinye isiguli ebesilele ngaphesheya kwalesi ebekukhulunywa naso.